Ekwentị kachasị elu na etiti etiti nwere arụmọrụ kacha mma n'oge a | Gam akporosis
Ndị a bụ ekwentị kachasị mma taa
Dị ka ọ dị na mbụ, AnTuTu na-akọkarị akụkọ kwa ọnwa ma ọ bụ, kama nke ahụ, ndepụta nke njedebe kachasị ike n'ahịa, ọnwa site n'ọnwa. Ya mere, na ohere ohuru a anyi na egosiputara gi onwa nke Jenụwarị nke afo a, nke bu nke ikpeazu putara ihe. Ka ahụ!
1 Ndị a bụ ekwentị nwere arụmọrụ kachasị mma nke February
2 Ihe kachasị mma na-arụ ọrụ n'etiti
Ndị a bụ ekwentị nwere arụmọrụ kachasị mma nke February
E gosipụtara ndepụta a n'oge na-adịbeghị anya, ma, dị ka anyị si pụta ìhè, bụ nke Jenụwarị gara aga, nke bụ ya mere AnTuTu nwere ike itinye mgbatị na nke a na ọkwa ọzọ nke ọnwa a, nke anyị ga-ahụ na Machị. Ndị a bụ ndị smartphones kachasị ike taa, dị ka usoro nyocha si dị:
Dịka enwere ike ịkọwapụta na ndepụta ahụ anyị tinye n'elu, ọhụrụ iQOO 7 na Xiaomi Mi 11 bụ anụ ọhịa abụọ ahụ dị na ọnọdụ abụọ mbụ, yana 728.784 na 705.593 isi, n'otu n'otu, na ọnụọgụ ọnụọgụ dị n'etiti ha adịchaghị oke. Amos smartphones nwere ike nile Qualcomm's Snapdragon 888 mobile platform nwere ike inye, o kwesiri ka a mara ya.
Onye nke atọ, nke anọ na nke ise nwere Huawei Mate 40 Pro, Huawei Mate 40 na Oppo Reno5 Pro + 5G, nke nwere ihe 702.553.408, 688.043 na 671.249, n'otu n'otu, iji mechie ebe ise mbụ dị na ndepụta AnTuTu na-aga nke ọma. [Ndepụta nke ọnwa gara aga: Top 10 nke kachasị mma mobiles nke oge ahụ]
10 nke kacha mma na-arụ ọrụ nke August 2020
N'ikpeazụ, ọkara nke abụọ nke okpokoro ahụ nwere iQOO 5 (665.959), Redmi K30S Extreme Edition (664.993), iQOO 5 Pro (664.252), Vivo X50 Pro + (663.766) na Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition ( , N'otu usoro, site na isii ruo nke iri.
Ihe kachasị mma na-arụ ọrụ n'etiti
N'adịghị ka ndepụta mbụ akọwapụtara, nke Qualcomm na Huawei chipsets na-achịkwa, ndepụta nke ekwentị kachasị elu nke 10 taa nwere arụmọrụ kachasị mma maka Jenụwarị 2021 site na AnTuTu nwekwara smartphones na ndị na-arụ ọrụ MediaTek. Samsung's Exynos, dịka na mbipụta ndị gara aga, enweghị ebe a ga-ahụ n'oge a.
Mgbe Redmi 10x 5G, nke jisiri ike nweta ogo 401.389 ma kwadoro ya site na Mediatek's Dimensity 820, the Redmi 10X Pro 5G, nke nke Dimensity 820 ekwuru na mbụ kwadoro, ka edobere n'ọnọdụ nke abụọ, yana akara nke 398.264. Nke a na-esote Huawei Nova 7, jiri akara nke 395.463. Ndị nke a na Kirin 985 na - arụ ọrụ.
Ekwentị Huawei Nova 7 Pro, Honor 30 na Honor X10 ha ejirila ọnọdụ nke anọ, nke ise na nke isii, n'otu n'otu, na ọnụ ọgụgụ nke 394.913, 390.862 na 361.347. Na Huawei Nova 7 SE ọ nọ n'ọnọdụ nke asaa, jiri akara nke 352.728 akara.
na Oppo Reno5 5G na Redmi Rịba ama 9 Pro 5G Ha nọ n'ọnọdụ nke asatọ na nke itoolu, na 349.329 na 347.876, n'otu n'otu. Onye mbu bu ama nke ejiri Snapdragon 765G di ike, ma emeputara nke abuo na Snapdragon 765G, ebe ndi Redmi nwere Qualcomm's Snapdragon 750G.
El Realme Q2 Pro 5GSite na Dimensity 800U na ihe anaghi elebanye anya na ihe 337.545 enwetara na ikpo okwu ule, ọ bụ nke ikpeazụ na naanị ama na ndepụta ahụ iji nweta Mediatek's Dimensity 800U chipset.
Chipsdị chipsets ndị anyị na-ahụ na ndepụta a pụtara ìhè. E nwere mmadụ ise nọ, Mediatek bụ onye na-ejikwa ịnọ na tebụl mbụ nke tebụl, wee nye Kirin dị ebube nke Huawei ohere, nwere oghere ise, yana obere oghere iji Qualcomm, nke jiri mgbalị ụfọdụ jisiri ike tinye ogo a. Ọ ka ga-ahụ otú Qualcomm si gbakee igbe ndị dị na nke a, nke na-ewepụtụ na ọkwa ndị na-adịbeghị anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ndị a bụ ekwentị kachasị mma taa
Ikuku ntanetị na-enweghị nchebe dị mma ma ọ bụ na ọ bụghị?
Nke a bụ otu ihe OnePlus 9 Pro si ese na ezigbo foto: nyocha ya na ese foto ọ ga - eji na - ehichapu [+ Video]